ikhitshi, umatshini wokuhlamba impahla, iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi aliqela - I-Airbnb
ikhitshi, umatshini wokuhlamba impahla, iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi aliqela
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguThanksgivings
Indawo yethu enenkonzo ibekwe kumbindi wesixeko. Ifanelekile, iphangalele kwaye ilungele izilwanyana. Ilungele i-expats, kunye nokuhlala kosapho.
Indawo yomgangatho weStudio yi-400 square feet, iyenza ibe nkulu kunomyinge wegumbi leendwendwe eSingapore. Igumbi ngalinye linikezela ngoomatrasi obutofotofo bobukhulu bokumkanikazi, indawo yokutyela, igumbi lokuhlambela labucala, ligcwele *ikhitshi
kunye * newasha kunye nesomisi. Inokulungiswa kunye ne-mattress eyongezelelweyo ye-3 pax, kwaye kunjalo, ukugcinwa kwendlu, i-wifi, kunye neeyure ezingama-24 zokwamkela.
Ukuba uhamba ngeshishini, sinikezela ngendawo yokusebenza kwindawo ephambili yokwamkela iindwendwe. Ukuba uhamba nenja okanye ikati, isilwanyana sakho samkelekile kakhulu.
Apha, ngexesha lokuhlala kwakho, unokufumana umthambo olungileyo kwindawo yethu yokuzivocavoca. Qinisekisa ukuba upakisha i-sunscreen eyaneleyo yokutshisa ilanga kwidekhi yasepool. Xa kuhlwa, ungaphumla kwaye ujabulele ukubukeka okubukekayo kwigadi yophahla.
Xa ujonga indawo yokuhlala enenkonzo, indawo idlala indima enkulu. Njengoko amagumbi ethu anenkonzo abekwe kwiindawo eziphambili, abahlali banokufikelela ngokulula kwisikhululo se-MRT kwaye bafike kwiSithili soShishino esiseMbindini (CBD) eSingapore. Umgama omfutshane osuka kwiindawo eziphithizelayo ezifana ne-Orchard, iSomerset kunye neDhoby Ghaut, oku kwenza kube lula kubahlali ukuba bathenge ngeempelaveki.
6 imizuzu-uhambo ukuya Fort Canning MRT (Downtown line)
8 ngomzuzu-uhambo ukuya eSomerset MRT (kuMntla-South line)
Kufuphi ne-CBD, iBugis kunye neRaffles
Amaziko onyango akufuphi aquka iSibhedlele sezoNyango iRaffles, isibhedlele saseMount Elizabeth kunye neSibhedlele esiPhakathi saseSingapore
Iivenkile ezikufutshane zibandakanya i313 Somerset, Orchard Central kunye neTakashimaya Singapore
4.72 · Izimvo eziyi-181
Indawo yethu enenkonzo ibekwe kumbindi wesixeko ngaphantsi kwemizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe esingaphantsi kweSomerset kunye ne-Fort Canning yokumisa indlela yangaphantsi.
Ibekwe kufutshane nesithili sokuthenga esidumileyo-iOrchard, isithili seshishini esisembindini-iRaffles Place, iindawo ezithandwayo zokuphola-eRobertson Quay, Clarke Quay & Mohamed Sultan Road, iindawo zenkcubeko-Igalari yeSizwe, iMyuziyam yoBugcisa, indawo yethu ilungele ishishini kunye nolonwabo.
Ivenkile enkulu kunye nevenkile yokutya nazo zonke zijikeleze ikona
Umbuki zindwendwe ngu- Thanksgivings
Igama lam ndinguDave, ndiyawubulela umdla wakho kwigumbi lethu elinenkonzo. ISingapore yindawo enyibilikayo yeenkcubeko apho iMpuma idibana neNtshona. Unokufumana uluhlu lwethu olubanzi lweenkcubeko kwiitempile, iipagoda kunye neevenkile. Embindini wayo yonke le nto kukho indawo yethu yokuhlala eneenkonzo.
Nokuba ulapha ngeshishini okanye udlale, siqinisekile ukuba uya kukonwabela ukuhlala kwakho nathi. Ukuba ufuna nantoni na ngexesha lotyelelo lwakho abasebenzi bethu baya kukuvuyela ukukunceda - kusasa, emini okanye ebusuku!
Ngena! Hlala nathi ukuze ube namava anemibala, neyokwenyani yobomi besixeko.
Igama lam ndinguDave, ndiyawubulela umdla wakho kwigumbi lethu elinenkonzo. ISingapore yindawo enyibilikayo yeenkcubeko apho iMpuma idibana neNtshona. Unokufumana uluhlu lwethu olu…
Inombolo yomthetho: Indawo Enomntu Oncedisayo Egunyazisiweyo